परमेश्‍वरले के गर्नुहुनेछ—परमेश्‍वरले कसरी हामीलाई मदत गर्नुहुनेछ
प्रहरीधरहरा | जुलाई २०१४
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टोंगन डच डाँग्मे डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोतोनक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मझतेक (हुआट्ला) मराठी मले मल्यालम माम माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?
परमेश्‍वरले दुष्टता र दुःखकष्टलाई के गर्नुहुनेछ
सैतानले ल्याएको दुःखकष्टलाई यहोवा परमेश्‍वर र उहाँको छोरा येशू ख्रीष्टले के गर्नुहुनेछ भनेर बाइबलले स्पष्टै बताएको छ। बाइबल भन्छ: “दियाबलका कामहरू नष्ट गर्ने उद्देश्‍यले नै परमेश्‍वरको छोरा प्रकट हुनुभएको थियो।” (१ यूहन्‍ना ३:८) लोभ, घृणा र दुष्टताले भरिएको यस दुष्ट युगको विनाश हुनेछ। “यस संसारको शासक” सैतानलाई चाहिं “बाहिर फ्याँकिनेछ” भनेर येशूले बताउनुभयो। (यूहन्‍ना १२:३१) सैतानको कुनै प्रभाव नरहेपछि न्यायले बास गर्ने नयाँ संसार स्थापित हुनेछ। अनि पृथ्वीभरि शान्ति छाउनेछ।—२ पत्रुस ३:१३.
आफ्नो आनीबानी परिवर्तन गर्न नचाहने अनि दुष्ट काम नत्याग्ने मानिसहरूलाई के हुनेछ? बाइबलको यो प्रतिज्ञा विचार गर्नुहोस्‌: “सोझाहरू पृथ्वीमा बास गर्नेछन्‌। र निर्दोष मानिसहरू त्यहाँ रहनेछन्‌। तर दुष्टहरू त्यहाँबाट जरैसमेत उखेलिनेछन्‌, र विश्‍वासघातीहरू झारझैं फ्याँकिनेछन्‌।” (हितोपदेश २:२१, २२) त्यसबेला दुष्ट मानिसहरूले कुनै प्रभाव पार्न सक्नेछैनन्‌। साथै पूरै पृथ्वीमा शान्ति छाउँदा आज्ञाकारी मानिसहरू जन्मजात पाएको पापबाट बिस्तारै स्वतन्त्र हुनेछन्‌।—रोमी ६:१७, १८; ८:२१.
त्यस नयाँ संसारमा परमेश्‍वरले कसरी दुष्टतालाई नामेट पार्नुहुनेछ? मानिसहरूको छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको हनन गरेर अनि तिनीहरूलाई रोबटजस्तै बनाएर त होइन। बरु, उहाँले आज्ञाकारी मानिसहरूलाई आफ्नो स्तरबारे सिकाउनुहुनेछ अनि तिनीहरूलाई खराब विचार र काम त्याग्न मदत गर्नुहुनेछ।
परमेश्‍वरले दुःखकष्टका सम्पूर्ण कारणहरूको नामोनिसान मेटाउनुहुनेछ
अचानक आइपर्ने आपत्‌विपत्‌बारे चाहिं के भन्‍न सकिन्छ? परमेश्‍वरले पृथ्वीमा चाँडै नै उहाँको सरकारले शासन गर्नेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्‍वरले नियुक्‍त गर्नुभएको त्यस सरकारको राजा येशू ख्रीष्टसित रोगबिमार निको पार्ने शक्‍ति छ। (मत्ती १४:१४) येशू प्रकृतिलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ। (मर्कूस ४:३५-४१) त्यसकारण, “समय र अवसर”-को कारण झेल्नुपर्ने दुःखकष्टको पनि अन्त हुनेछ। (उपदेशक ९:११) ख्रीष्टको शासनमा मानिसहरूले कुनै आपत्‌विपत्‌को सामना गर्नुपर्ने छैन।—हितोपदेश १:३३.
दुष्टताको सिकार भएर मरेका लाखौं निर्दोष मानिसहरूको लागि के आशा छ? आफ्नो मित्र लाजरसलाई मरेको अवस्थाबाट ब्यूँताउनुअघि येशू ख्रीष्टले यसो भन्‍नुभयो: “पुनर्जीवन र जीवन मै हुँ।” (यूहन्‍ना ११:२५) साँच्चै! येशूसित मरेकाहरूलाई पुनर्जीवित पार्ने अर्थात्‌ फेरि जीवन दिने शक्‍ति छ।
असल मानिसहरूले दुःख नपाउने संसारमा बाँच्ने आशा के तपाईंलाई मन पऱ्‍यो? त्यसो हो भने साँचो परमेश्‍वर र उहाँको उद्देश्‍यबारे अझै सिक्न बाइबल अध्ययन गर्नुभए कसो होला? तपाईंको छरछिमेकका यहोवाका साक्षीहरू तपाईंलाई यसबारे अझ धेरै कुरा बताउन तयार छन्‌। आफ्नो घर नजिकै बस्ने यहोवाका साक्षीहरूसित सम्पर्क गर्न अथवा यस पत्रिकामा दिइएको ठेगानामा पत्राचार गर्न हामी तपाईंलाई अनुरोध गर्दछौं।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने परमेश्‍वरले दुष्टता र दुःखकष्टलाई के गर्नुहुनेछ
w१४ ७/१ पृ. ७
आवरण लेख दुःखकष्टको भुमरी!
आवरण लेख असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌—किन?
आवरण लेख परमेश्‍वरले दुष्टता र दुःखकष्टलाई के गर्नुहुनेछ
बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ बन्दुक नबोकी हिंडेको दिनै थिएन
के हामी अदृश्‍य परमेश्‍वरलाई देख्न सक्छौँ?
बाइबल प्रश्‍नहरूको जवाफ
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?
अडियो अडियो डाउनलोडका विकल्पहरू प्रहरीधरहरा असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?
असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?
प्रहरीधरहरा असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?